Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » New York JFK iinqwelomoya eziya eLisbon ngeTAP Air Portugal ngoku
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • abantu • IPortugal Breaking News • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
New York JFK iinqwelomoya eziya eLisbon ngeTAP Air Portugal ngoku.
I-TAP's 10 North American gateways ngoku iquka iBoston, Cancun, Chicago, Miami, Montreal, Newark, New York (JFK), San Francisco, Toronto, and Washington, DC (Dulles).
I-TAP Air Portugal ibuyela kwi-JFK yaseNew York kunye nezikhululo zeenqwelomoya zaseNewark ngeenqwelomoya ezisuka eLisbon.
I-TAP iya kusebenza ngokungapheliyo ukusuka kwi-JFK ukusuka nge-7 kaNovemba ukuya nge-31 kaJanuwari 2022, icutha ukuya kwiinqwelomoya ezine ngeveki ukusuka nge-2 kaFebruwari ukuya nge-25 kaMatshi.
Indiza entsha, i-TP 210, iya kuhamba nge-JFK ngo-10pm, ifike e-Lisbon ngo-9: 30am, ngentsasa elandelayo.
I-TAP Air Portugal iphinda isebenze kuzo zonke ezisi-7 zesango lase-US ngokubuyiswa kwenkonzo evela eNew York John F Kennedy International Airport izolo ebusuku. Ngenkonzo yemihla ngemihla ukusuka kwi-JFK ukuya kuJanuwari nakwixesha lasehlotyeni, abantu baseNew York baya kuba neenqwelomoya ezintathu zemihla ngemihla eziya e-Lisbon nge-TAP, zisuka kwi-JFK naseNewark Liberty International.
TAP izakusebenza mihla le ingayeki ukusuka JFK ukusuka ngoNovemba 7 ukuya kuJanuwari 31, 2022, inciphisa ukuya kwiinqwelomoya ezine ngeveki (ngoMvulo, ngooLwezithathu, ngooLwezihlanu nangeeCawe) ukusuka nge-2 kaFebruwari ukuya kwi-25 kaMatshi. JFK inkonzo iya kusebenza yonke imihla kwakhona ehlotyeni, ukuqala nge-27 kaMatshi.
Indiza entsha, i-TP 210, iya kuhamba nge-JFK ngo-10pm, ifike e-Lisbon ngo-9: 30am, ngentsasa elandelayo. Indiza ebuyayo, i-TP 209, iya kushiya i-Lisbon ngo-5pm, ifike kwi-JFK nge-8pm.
Indlela entsha izakusetyenziswa ngenqwelomoya ye-TAP ye-Airbus A330-900neo, ene-Airspace entsha yi-Airbus cabin.
Ubume kunye noyilo lwekhabhinethi ludala imeko ehlaziyiweyo, yale mihla, enezihlalo ezinendawo enzulu kuQoqosho, kwisigqubuthelo sesihlalo semithunzi eluhlaza kunye nengwevu, kunye negumbi lomlenze kwi-EconomyXtra, kwimithunzi eluhlaza nabomvu.
Isihlalo sesihlalo kuqoqosho oluqhelekileyo luyi-intshi ezingama-31, ngelixa i-EconomyXtra inikezela nge-intshi ezintathu ezongezelelweyo ze-legroom, kwi-pitch ye-34 intshi. I-A330-900neo inezihlalo ze-168 kuQoqosho kunye nezihlalo ze-96 kwi-EconomyXtra.
Kwiklasi yoShishino lwe-TAP, i-TAP ibonelela ngezitulo ezithe tyaba ezitsha ezingama-34 ezingaphezulu kweemitha ezintandathu ubude xa zihleli ngokupheleleyo. Izihlalo zeklasi yeshishini le-TAP ziquka iindawo zokuphuma kuzo zombini ii-USB kunye neeplagi zombane zomntu ngamnye, uqhagamshelo lwee-headphones, izibane zokufunda zomntu ngamnye, kunye nendawo eyongezelelekileyo - kubandakanywa negumbi lokugcina.
I-TAP's 10 North American gateways ngoku iquka iBoston, Cancun, Chicago, Miami, Montreal, Newark, New York (JFK), San Francisco, Toronto, and Washington, DC (Dulles). NgoDisemba 11, I-TAP Air Portugal iyakwazisa imisebenzi yayo yokuqala yeCaribbean, ngenkonzo engapheliyo phakathi kweLisbon kunye nePunta Cana eDominican Republic, i-TAP's 11th Isango laseMntla Melika.